सिद्धार्थ बैंकको रु. ३ अर्बको ऋणपत्र असोज १६ बाट निष्कासन हुने Bizshala -
परिसूचक र कारोबार रकममा बढोत्तरी, अब बैंकिङ समूह चल्ला ?
अमेजनले बढायो ‘वर्क फ्रम होम’को अवधि, अब कर्मचारीले आउँदो जुनसम्म घरबाटै काम गर्नसक्ने
बीओके स्मार्टबाट 'डिजिटल दक्षिणा' पठाउनुस्, रु. ३०० सम्मको नगद उपहार पाउनुस्
ब्रोकर नम्बर ४० बाट सेयर किनबेचमा समस्या, कारण यस्तो
काठमाण्डौ । सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडले ३ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋणपत्र असोज १६ गतेदेखि निष्कासन गर्ने भएको छ।
बैंकले १ हजार रुपैयाँ अंकित दरका ३० लाख इकाइको ‘८.५० प्रतिशत एसबीएल डिबेन्चर २०८४’ नामक ऋणपत्र निष्कासन गर्न लागेको हो। ऋणपत्रका कुल इकाइमध्ये १८ लाख इकाइ व्यक्तिगत तवरबाट बिक्री गरिनेछ भने बाँकी १२ लाख इकाइ सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरिनेछ। सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरिने कुल इकाइमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात ६० हजार इकाइ सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ। सर्वसाधारणले बाँकी ११ लाख ४० हजार इकाइका लागि खरिद आवेदन दिन सक्नेछन्।
यो ऋणपत्रमा लगानीकर्ताले न्यूनतम २५ इकाइका लागि दरखास्त दिन सक्नेछन्। अधिकतममा सम्पूर्ण इकाइका लागि खरिद आवेदन दिन सकिनेछ।
ऋणपत्र निष्कान बन्द छिटोमा असोज २० गते र ढिलोमा असोज ३० गते (बैंकिङ समयपछि) हुनेछ।
ऋणपत्रको निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ।
लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट इजाजतपत्र प्राप्त सि–आस्वामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु तथा तिनका शाखा कार्यालयहरुबाट आवेदन दिन सक्नेछन्।
सातवर्षे यो ऋणपत्रमा बैंकले वार्षिक ८.५ प्रतिशतका दरले प्रत्येक आर्थिक वर्षको प्रथम र द्वितीय अर्धवार्षिक समाप्त भएपश्चात ब्याज भुक्तानी गर्नेछ।
इक्रा नेपालले यो ऋणपत्रलाई इक्रा एनपी आईआर ए माइनस एटदरेट रेटिङ प्रदान गरेको छ। यो रेटिङ प्राप्त गर्ने संस्था समयमा वित्तीय दायित्व पूरा गर्ने सम्बन्धमा पर्याप्त मात्रामा सुरक्षित मानिन्छ र यस्ता संस्थाहरुको न्यून कर्जा जोखिम रहेको हुन्छ।
8.50% SBL Debenture 2084 siddartha bank limited
निर्धन उत्थान लघुवित्तद्वारा अतिविपन्न परिवारलाई रु. ७.२५ करोड आर्थिक अनुदान सहयोग
सिटिजन्स बैंकसँग नेप्सेले माग्यो स्पष्टीकरण, यस्तो छ कारण
शिवम् सिमेन्ट्सको बुक क्लोज तय, कहिलेसम्मका सेयरधनीले पाउनेछन् नगद लाभांश ?
लगातार दुई दिन स्थिर रहेको सुनको भाउ आज बढ्यो, कति पुग्यो ?
सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ स्किम–२ : सेयरमा लगानी बढ्यो
काठमाण्डौ । यो साता कारोबारको चौथो दिन बुधबार नेप्से परिसूचकको...
काठमाण्डौ । साताको चौथो दिन आज बुधबार स्टक ब्रोकर नम्बर ४० क्रिएटिभ...
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले कारोबार समयमा मूल्यमा...
शिवम् सिमेन्ट्सको बुक क्लोज तय, कहिलेसम्मका सेयरधनीले
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि प्रस्तावित लाभांश...
काठमाण्डौ । सिद्धार्थ म्युचुअल फन्डअन्तर्गतको सिद्धार्थ...
परिसूचकमा दोहोरो अंकको बढोत्तरी, सबै समूहमा हरियाली
काठमाण्डौ । नेप्से परिसूचक आज मंगलबार पनि दोहोरो अंकले बढेको छ।...
किन घटेन ब्रोकर कमिसन ? यस्तो रहेछ कारण
काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले असोज मसान्तदेखि नयाँ ब्रोकर...
बिजशाला समाचार प्रभाव : ब्रोकर नं. ४३ का कर्मचारीले तलब र
काठमाण्डौ । साउथ एसियन बुल्स प्रालि (स्टक ब्रोकर नम्बर ४३) ले...